အရင်ကပျော်ခဲ့ဖူးတာတွေကို မှတ်မိနေပေမယ့် မပျော်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ R ဇာနည် – OK Media
အရင်ကပျော်ခဲ့ဖူးတာတွေကို မှတ်မိနေပေမယ့် မပျော်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ R ဇာနည်
March 7, 2022 Ok MediaLeaveaComment on အရင်ကပျော်ခဲ့ဖူးတာတွေကို မှတ်မိနေပေမယ့် မပျော်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ R ဇာနည်
အဆိုတော် R ဇာနည် ကတော့ အသံပါဝါကောင်းကောင်းနဲ့ သီချင်းကောင်းများစွာကို သီဆိုထားနိုင်ပြီး ပရိသတ်ပေါင်းများစွာရရှိထားတဲ့ နာမည်ကြီးအဆိုတော်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
ဇနီးချောဝမ်းနဲ့ ပျော်စရာကောင်းတဲ့ အိမ်ထောင်ရေးခရီးလမ်းကို လျှောက်လမ်းနေပြီး ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ ကလေးလေး သုံးယောက်ကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်ထားပါသေးတယ်။
R ဇာနည် ဟာသီချင်းကောင်းများစွာကို သီဆိုနိုင်တဲ့အပြင် The Voice Myanmar သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲမှာလဲ ဒိုင်အဖြစ်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ လက်ရှိမှာ R ဇာနည် ဟာမိသားစုနဲ့ခွဲခွာပြီး အမှန်တရားအတွက် ဘေးကင်းရာကို တိမ်းရှောင်နေရတာပါ။
အဆိုတော် R ဇာနည် ဟာ မကြာသေးခင်နာရီပိုင်းလောက်က အရင်ကပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာ အမှတ်တရတွေကို သတိရပေမယ့် မပျော်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကို ရင်ဖွင့်ထားပါတယ်။ ” အော် ငါ့သယ်ရင်းမိတ်ဆွေတွေ…….
တချို့ ပူဆွေးနေရသလို တချို့ ကိုယ်နဲ့မဆိုင်သလို ပျော်သလို မပျော်သလို ပျော်လို့မဟုတ်ဘူး မတတ်သာသလို ပုံတွေတွေ့ရတာလဲ မှတ်သားစရာပါပဲ ငါလဲ အရင်က ဒီလိုပဲ ပျော်နေခဲ့ဖူးတာ မှတ်မိသလိုပဲ ” လို့ သူရဲ့ကိုယ်ပိုင်အကောင့်မှာ ရေးသားထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။
ပရိသတ်ကြီးရေ မိသားစုနဲ့အတူရှိခွင့်မရတဲ့အပြင် ပျော်ရွှင်စရာတွေနဲ့ ဝေးရာမှာနေမှာ တိမ်းရှောင်နေရတဲ့ အဆိုတော် R ဇာနည် အတွက် အားပေးစကားလေးတွေ ပြောပေးခဲ့ပါအုန်းနော်။ အချိန်ပေးပြီးဖတ်ရှု့ပေးတဲ့ စာဖတ်ပရိသတ်ကြီးကို ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။
အရင္ကေပ်ာ္ခဲ့ဖူးတာေတြကို မွတ္မိေနေပမယ့္ မေပ်ာ္ႏိုင္ဘူးဆိုတဲ့ R ဇာနည္
အဆိုေတာ္ R ဇာနည္ ကေတာ့ အသံပါဝါေကာင္းေကာင္းနဲ႔ သီခ်င္းေကာင္းမ်ားစြာကို သီဆိုထားႏိုင္ၿပီး ပရိသတ္ေပါင္းမ်ားစြာရရွိထားတဲ့ နာမည္ႀကီးအဆိုေတာ္တစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။
ဇနီးေခ်ာဝမ္းနဲ႔ ေပ်ာ္စရာေကာင္းတဲ့ အိမ္ေထာင္ေရးခရီးလမ္းကို ေလွ်ာက္လမ္းေနၿပီး ခ်စ္ဖို႔ေကာင္းတဲ့ ကေလးေလး သုံးေယာက္ကိုလည္း ပိုင္ဆိုင္ထားပါေသးတယ္။
R ဇာနည္ ဟာသီခ်င္းေကာင္းမ်ားစြာကို သီဆိုႏိုင္တဲ့အျပင္ The Voice Myanmar သီခ်င္းဆိုၿပိဳင္ပြဲမွာလဲ ဒိုင္အျဖစ္ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါေသးတယ္။ လက္ရွိမွာ R ဇာနည္ ဟာမိသားစုနဲ႔ခြဲခြာၿပီး အမွန္တရားအတြက္ ေဘးကင္းရာကို တိမ္းေရွာင္ေနရတာပါ။
အဆိုေတာ္ R ဇာနည္ ဟာ မၾကာေသးခင္နာရီပိုင္းေလာက္က အရင္ကေပ်ာ္႐ႊင္ဖြယ္ရာ အမွတ္တရေတြကို သတိရေပမယ့္ မေပ်ာ္ႏိုင္ဘူးဆိုတဲ့အေၾကာင္းကို ရင္ဖြင့္ထားပါတယ္။ ” ေအာ္ ငါ့သယ္ရင္းမိတ္ေဆြေတြ…….
တခ်ိဳ႕ ပူေဆြးေနရသလို တခ်ိဳ႕ ကိုယ္နဲ႔မဆိုင္သလို ေပ်ာ္သလို မေပ်ာ္သလို ေပ်ာ္လို႔မဟုတ္ဘူး မတတ္သာသလို ပုံေတြေတြ႕ရတာလဲ မွတ္သားစရာပါပဲ ငါလဲ အရင္က ဒီလိုပဲ ေပ်ာ္ေနခဲ့ဖူးတာ မွတ္မိသလိုပဲ ” လို႔ သူရဲ႕ကိုယ္ပိုင္အေကာင့္မွာ ေရးသားထားတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။
ပရိသတ္ႀကီးေရ မိသားစုနဲ႔အတူရွိခြင့္မရတဲ့အျပင္ ေပ်ာ္႐ႊင္စရာေတြနဲ႔ ေဝးရာမွာေနမွာ တိမ္းေရွာင္ေနရတဲ့ အဆိုေတာ္ R ဇာနည္ အတြက္ အားေပးစကားေလးေတြ ေျပာေပးခဲ့ပါအုန္းေနာ္။ အခ်ိန္ေပးၿပီးဖတ္ရႈ႕ေပးတဲ့ စာဖတ္ပရိသတ္ႀကီးကို ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါတယ္။
သံမဏိတပ်ဖွဲ့မှ ပန်ဆယ်လိုနဲ့ပန်ဆယ်လိုမိတ်ဆွေများ လှူထားတဲ့လက်နက်များရောက်ရှိသောကြောင့် ကျေးဇူးတင်စကားဆိုလာသည့် (ရုပ်သံ)
ကိုယ်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့ ” နေရာ” ကိုသိတယ်လို့ ပြောလိုက်တဲ့ ပြည်သူ့အချစ်တော် မင်း‌မော်ကွန်း
February 13, 2022 Ok Media
ရှေ့နေနဲ့ မိသားစုကိုယ်တိုင် အတည်ပြု ထုတ်ပြောလာတဲ့ ပိုပိုနဲ့ရဲတိုက် ကျန်ခဲ့ရတဲ့ အကြောင်းအရင်းအမှန် Cele News